Thread: [mm]jrefrmhta&; "gwfyHk[/mm]/[mm]ADG'D,dkowif;rsm;[/mm]
02-07-2012 03:31 AM #21
Wizard Cupid ?
Thanked 23,970 Times in 1,158 Posts
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လူထုဟောပြောပွဲ ကျင်းပမည့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့ ကိုးသိန်းဘောလုံးတွင်းကို နံနက် ၉ နာရိ ၃၀ မိနစ်ခန့်တွင်တွေ့ရစဉ်--
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ကြိုဆိုရန် စောင့်စားနေသူရာကျော်ကို ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ် ဒါးကတွင် ယနေ့ နံနက် ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ်က တွေ့ရစဉ်
Last edited by aungzaya; 02-07-2012 at 05:07 AM.
adaptor, arch-angel, blackcat13, FreezE, greenwood, happyvalley, htinlinn, Jim, koluchaw, ktg, mahawgani, MATRIX, MaungHtwe, MNO.BN, nijinsky, Perigee, Peter Pan, phyo77, Thant Sin Htet, THARGYII, thuthuaung, TUN2N
02-07-2012 04:45 AM #22
လမ်းခရီးတွင် ကြိုဆိုထောက်ခံသူများကို နှုတ်ဆက်နေရခြင်းကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လူထုဟောပြောပွဲ ကျင်းပမည့် ဘောလုံးကွင်းသို့ မျှော်မှန်ထားသော အချိန်ထက် နောက်ကျပြီးမှ ရောက်ရန်ရှိနေသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းင်းအား ကြိုဆိုထောက်ခံနေသူများမှာမူ စိတ်ညီးညူးမှု မရှိဘဲ ဖွင့်လှစ်နေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂုဏ်ပြုသီချင်းများကို လိုက်ပါသီဆိုနေကြပါသည်ကို တွေ့ရသည်။
နည်းပညာတကသိုလ်(ပုသိမ်)မှ ကျောင်းသားတစ်ဦးက 'အမေစုကို အပြင်မှာ မျက်လုံးနဲ့တောင် နှစ် ၂၀ ကျော် မမြင်ဖူးပါဘူး။ အခုလို အမေစု ဒီကိုလာတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတက်တဲ့အချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အတွက် ဒီလိုထွက်ပြီး ကြိုဆိုချင်းဖြစ်ပါတယ်။ အမေစုက ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် အပြည့်အ၀ ထောက်ခံပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အခုလို ကြိုဆိုနေတာ ဘယ်ပုဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းကမှ နှိုးဆော်တိုက်တွန်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ကြိုဆိုထောက်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်'ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လူထုဟောပြောပွဲ ကျင်းပမည့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့ ကိုးသိန်းဘောလုံးတွင်းအတွင်းတွင် ရောက်ရှိနေကြသော ပြည်သူများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာပါစေ၊ ချမ်းသာပါစေ ဟု ဟစ်ကြွေးလျက်ရှိကာ ဘောလုံးကွင်းအတွင်း ဖွင့်လှစ်ထားသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဂုဏ်ပြုဖွဲ့ဆိုထားသည့်သီချင်းကို ၀ိုင်းဝန်းသီဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။
ပုသိမ်သက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသား ၂၀၀ ကျော် အစဉ်အလာမရှိသောစာမေးပွဲ မဖြေဟု ဆိုပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြိုဆိုသည့်နေရာသို့ ရောက်နေကြသည်။
ကြိုဆိုရေးကားပေါ်မှ NLD ပါတီဝင်တစ်ဦးကပုသိမ်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျေားသား၊
ကျောင်းသူများအားခွပ်ဒေါင်းအလံအားဝှေ့ယမ်း၍နှုတ်ဆက်ေ နစဉ်။ (ဓါတ်ပုံ-မက်စင်ဂျာဂျာနယ်)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပုသိမ်မြို့မှ ကြိုဆိုနေသည့်ပရိသတ် အလွန်များပြားလှကြောင်း၊ လမ်းဘေးနှစ်ဘက်နှစ်ချက်တွင် အပြည့်နီးပါး ဖြစ်နေသည်ဟု ပုသိမ်မြို့အထွက် ကိုးဆူတွင် စောင့်ဆိုင်းနေသည့် ပုသိမ်မြို့ခံ ဦးမြင့်ဦးက ပြောသည်။ ယင်းနေရာမှ ပရိသတ်နှင့် အတူ အန်အယ်လ်ဒီ သဘာပတိ အဖွဲ့နာယက ဦးတင်ဦးလည်း လာရောက်စောင့်ဆိုင်းလျှက်ရှိသည်ဟု သိရသည်။ နံနက် ၉နာရီ ၄၀ ၀န်းကျင်ထိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုးဆူသို့ ရောက်ရှိမလာသေးကြောင်း၊ ကိုးသိန်းအားကစားကွင်းသို့ ၁၀ နာရီကျော်မှ ရောက်မည်ဟု ၎င်းက ခန့်မှန်းပြောကြားသည်။
Last edited by aungzaya; 02-07-2012 at 04:58 AM.
adaptor, arch-angel, aura, Ceiko, explorer, fergusan, FreezE, greenwood, happyvalley, htinlinn, Jim, koluchaw, ktg, mahawgani, MNO.BN, Perigee, Peter Pan, suuchit, THARGYII, thuthuaung, TUN2N, WineCho1500, zani, zzz
02-07-2012 04:48 AM #23
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ပုသိမ်လူထု
ကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး က မနက်ကိုးနာရီ မုန့်ဟင်းခါးကြွေး သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် မနက်ကိုးနာရီမရောက်ဘဲ ၁၁ နာရီမှ ရောက်သဖြင့် မုန့်ဟင်းခါးသွားစားသူများ အချိန်မှီလို့ ကွင်းထဲဆင်းလာကြပြီ ။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ကြီးမှူး၍ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက် နံနက်တွင် ပုသိမ်မြို့၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်(ရွှေဝါထွန်းရပ်ကွက်)တွင် စတုဒီသာ မုန့်ဟင်းခါး ပိဿာချိန် ၆၀၀ ကျွေးမွေးလှူဒါန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုး တိုင်းဒေသကြီးပါတီဝင်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စောမူက ပြောကြားသည်။
ထိုသို့ မုန့်ဟင်းခါးစတုဒီသာ ကျွေးမွေးလှူဒါန်းခြင်းမှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ လမ်းတံတား ၅၉ စင်း တည်ဆောက်ပြီးမြောက်သည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် လှူဒါန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
စတုဒီသာကို နံနက် ၇ နာရီမှ မုန့်ဟင်းခါးကုန်သည်ထိ ကျွေးမွေးမည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
၇ ရက်၊ နံနက် ၁၀ နာရီ ၅၀ မိနစ် (YPI ) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ကိုးသိန်းကွင်းရောက်တော့မည် ပုသိမ်မြို့တွင်းသို့ဝင်လာနေပြီ
ဖြစ်သည် ၁၀နာရီ ၅၀ မိနစ်တွင် ကန်သုံးဆင့်သို့ရောက်နေပြီဟု လိုက်ပါလျှက်ရှိသည့် မြိ့ခံတဦးကပြောသည်။ မြို့တွင်းလမ်းအချို့ပိတ်ထားသဖြင့် ကွေ့ပတ်ကာ သွားနေရသည်ဟု ဆိုသည်။
Source: We Fight We Win
Last edited by aungzaya; 02-07-2012 at 05:15 AM.
adaptor, arch-angel, aura, FreezE, greenwood, happyvalley, htinlinn, Jim, koluchaw, ktg, mahawgani, MNO.BN, nijinsky, patriot, Perigee, Peter Pan, THARGYII, thuthuaung, TUN2N, WineCho1500, zani
02-07-2012 05:20 AM #24
Wannabe Cupid New generation , new hope
Thanked 929 Times in 79 Posts
Thanksalot to uploader Aungzayya. My lunch time is over but i can not continue the work.
So encouraging pictures and i am so happy to see like this.
Even the eyes are wet with sledom tears after i am matured.
FreezE, greenwood, htinlinn, julykoko2009, koluchaw, ktg, mahawgani, MNO.BN, nijinsky, Perigee, THARGYII
02-07-2012 05:45 AM #25
(Credit to Messenger News and Eleven Media Group)
Last edited by batoe; 02-07-2012 at 05:54 AM.
BoBoeAung, Ceiko, FreezE, greenwood, happyvalley, hellocatcat, htinlinn, julykoko2009, juniorms, khit, ko too, kohtwe, koluchaw, ktg, mahawgani, MNO.BN, patriot, Perigee, Peter Pan, phyo77, robin76, THARGYII, thatonthu, thuthuaung, TUN2N, WineCho1500, zzz
02-07-2012 05:51 AM #26
jynfolucspfaom? jynfoludkcspfaom rrykodrfol
13713, BH, BoBoeAung, Ceiko, FreezE, greenwood, hellocatcat, htinlinn, Jim, julykoko2009, juniorms, khit, koluchaw, koshwemung, ktg, mahawgani, mgchaint, MNO.BN, patriot, Perigee, Peter Pan, phyo77, robin76, THARGYII, thatonthu, thuthuaung, TUN2N, WineCho1500
02-07-2012 07:35 AM #27
"gwfyHkrsm;wif&mwGif atmufygpnf;urf;udk vdkufemay;yg&ef/
2-1/ oD;jcm; website rsm;rS wdkuf½dkuful;wifjcif; (hot link) vkyfjcif; rjyKvkyfbJ file server rsm; rS wpfqifh wifay; Mu&rnf jzpfygonf/ tao;pdwfudk þae&m ( yHkawGb,fvdkwifMuvJAs ) wGif avhvmEdkif ygonf/ armh'f tuf'rifrsm; taejzifh xdkodkYaom hot link rsm;udk wnf;jzwf ay;rnf jzpfaomfvnf; refbm wpfOD;wnf;rS Budrfzefrsm;pGm jyKvkyfvmygu ta&;,lrnf jzpfygonf/
badinf, batoe, cohtet, fergusan, FreezE, greenwood, Jim, kosatsu, ktg, mahawgani, MNO.BN, Oscar Htun, Perigee, TUN2N, WineCho1500
02-07-2012 10:39 AM #28
ပုသိမ်မြို့သို့ရောက်ရှိနေသော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၇) ရက်နေ့တွင် ပုသိမ်မြို့ ဘောလုံးကွင်းအတွင်း တခဲနက်ထောက်ခံအားပေးကြသော လူထုပရိသတ်ကြီးသို့ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
Photo Credit : Yatanarpon National Web Portal ( AFP )
badinf, BoBoeAung, Chit.tat.lun.tu, fergusan, FreezE, galladino, greenwood, Incubuz, Jim, julykoko2009, koshwemung, mahawgani, MATRIX, MNO.BN, patriot, Perigee, Peter Pan, thuthuaung, Tonyhtun, TUN2N, WineCho1500, zzz
02-07-2012 10:49 AM #29
Credit : Yatanarpon National Web Portal ( AFP )
badinf, BoBoeAung, Chit.tat.lun.tu, fergusan, FreezE, galladino, greenwood, htinlinn, Incubuz, Jim, koshwemung, mahawgani, MATRIX, MNO.BN, Perigee, Peter Pan, thuthuaung, Tonyhtun, TUN2N, WineCho1500, zzz
02-07-2012 11:05 AM #30
badinf, BoBoeAung, Chit.tat.lun.tu, fergusan, FreezE, galladino, greenwood, htinlinn, Incubuz, Jim, khit, kosatsu, koshwemung, mahawgani, MATRIX, MNO.BN, Perigee, Peter Pan, thuthuaung, Tonyhtun, TUN2N, WineCho1500, zzz